Imisebenzi yangemva kwesikole - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ukufunda bukhomaImisebenzi yomphakathi
Hlangana nabantu abavela kuwo wonke umhlabaImisebenzi yomphakathi
UBli uzilungiselele uhlelo lomsebenzi omuhle olwenzeka nsuku zonke ekugcineni kwamakilasi akho.
Sincoma bonke abafundi bethu ukuthi babambe iqhaza ezinhlelweni ngoba kuyindlela yokuzwa impilo namasiko eCanada, futhi kukunikeza ithuba lokuhambela izindawo eziningi ezithakazelisa kakhulu emadolobheni lapho kutholakala khona izikole zethu. Ngaphezu kwalokho, ukubamba iqhaza ohlelweni lwethu lomsebenzi kuzokunikeza ithuba lokuzijwayeza ulimi olufundayo ngaphandle kwekilasi.
Imisebenzi yantambama iqondiswa ngabasebenzi bethu abazokusiza ukuthi ufunde kabanzi mayelana nedolobha lapho ufunda khona.
Ngezimpelasonto sinikeza uhambo losuku emadolobheni afana neQuebec, Montreal, Ottawa, iSkiing ebusika phakathi kwabanye abaningi, futhi izinkambo zangempelasonto eziya eToronto naseNiagara Falls, eTadoussac nezinye eziningi!
E-BLI uzohlala uthola umsebenzi wokugcina umatasatasa futhi wenze abangane abasha abavela kuwo wonke umhlaba!
Yiba yingxenye ye-adventure futhi ubhalise manje! Uzokwazisa okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ozokukhumbula impilo yakho yonke.
Ukubamba iqhaza kunoma yikuphi kwemicimbi, vele ubhalise e-reception, cela isisebenzi noma usebenzise ifomu lethu lokubhalisa lomsebenzi.
Imisebenzi yemihla ngemihla ngemuva kwesikole